Ciidamada dawlada soomaaliya ayaa waxaa duleedka afgooye lagula eegtay qarax – STAR FM SOMALIA
Wararka ka imaanaya Degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha hoose, ayaa sheegaya in ciidamada Dowladda Qarax Khasaaro geystay lagula eegtay Duleedka Degmada Afgooye.
Qaraxan ayaa la sheegayaa inuu ahaay miinada nooca dhulka lagu aaso, waxaana lala eegtay gaari Cabdi Bile ah oo ciidamada Dowladda ay saarnaayeen.
Waxa uu ka dhacay Qaraxa meel ku dhaw Beerta Aadan Seeraar, waxaana la sheegayaa in lix Askari oo ka mid ahaa ciidamadii saarnaa gaariga Cabdi Bilaha ay ku dhaawacmeen Qaraxaasi.
Qaraxan oo ahaa Miinada dhulka lagu aaso ee meelaha fog fog laga hago, ayaa wararka waxa ay sheegayaan inuu ku dhintay hal Askari oo ka tirsan ciidamada Dowladda.
Wararka qaar waxa ay sheegayaan xilliga qaraxa lala eeganaayay ciidamada Dowladda inay ku guda jireen howlgal ammaanka ay ku xaqiijinayeen, balse qaraxaan lala helay.
Saraakiisha ciidamada Dowladda, gaar ahaan kuwa Millateriga weli kama aysan hadlin Qaraxaan maanta ciidamada Dowladda lagula eegtay Duleedka Degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha hoose.
Gaadiidka ciidanka ay saaran yihiin oo wadooyinka si xoog ah ku mara ayaa inta badan ka carara miinooyinka dhulka lagu aaso ee Shabaab ay ku qarxiyaan ciidamada Dowladda.